Gudoomiyiha Nairobi oo Ugu Dambeyn Isagoo Bah-Dilan Xabsi Loo Taxaabay. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Gudoomiyiha Nairobi oo Ugu Dambeyn Isagoo Bah-Dilan Xabsi Loo Taxaabay. (Warbixin)
December 10, 2019 3:40 pm by admin Views: 66
Dowladda Kenya waxay xirtay gudoomiyaha magaalada caasumadda ah ee Nairobi, Jimcihii kadib amar uu soo saaray Xeer Ilaaliyaha guud ee dalkaas, Nuuradiin Xaaji, amarkaasoo ahaa in lagu xiro eedeymaha la xiriira dambiyada musuqmaasuqa. Sida ay qoreen wargeysyada Kenya.
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ayaa ku eedeeyay Mike Sunko iyo mas’uuliyiinta kale ee Kenya inay ka faa iideysteen iibsi sharci darro ah aoo ku kacaya $ 3.5 milyan.
Gudoomiyaha gobolka Mike Sunko ayaa qeyb ka noqday mas”uuliyiin lagu soo xiray silsilado hawl gallo ah oo ka dhacay wadanka.
Guddiga anshaxa iyo la-dagaallanka musuqmaasuqa ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Guddigu wuxuu xaqiijinayaa in Guddoomiyaha Nairobi Mike Sunko la qabtay isaga oo ka cararaya xabsi ku yaal Foy.”
Xaaji wuxuu yiri, isagoo faallo ka bixinaya amar maxkamadeedka xiritaanka ‘soonko’, wuxuu hayaa caddeyn ku filan oo uu ku maxkamadeyn karo guddoomiyaha Nairobi iyo mas’uuliyiinta kale ee degmadu “laaluushka sharci-darrada ah ee hantida shacabka, lunsiga lacageed iyo dambiyo kale oo maaliyadeed.”
Sonko, oo ah siyaasi muran badan dhaliyay, ayaa xabsi la dhigay ka hor doorashadiisa gudoomiyaha Nairobi, laakiin wuxuu ku adkeystay inuu dafiro eedeymaha loo haysto ee ah falal sharci darro ah iyo ka ganacsiga maandooriyaha.
Xeer-ilaaliyaha ayaa sheegay in baaritaanka uu ku sameeyay Sonco iyo saraakiishiisa uu ahaa caqabad, waayo waxaa jiray xeelado badan oo ay adeegsanayeen eedeysanayaasha.
Sonko ma ahan sarkaalkii ugu horreeyay ee lagu soo eedeeyo musuqmaasuq. Waxa uu eedeeyey daraasiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladda, oo uu ku jiro Wasiirka Maaliyadda ee waqtigiisu dhammaaday Henry Rutich, kaasoo bishii July lagu eedeeyay musuqmaasuq dhan 1 Milyan oo doollar.
Rotic iyo ku dhawaad 20 sarkaal oo kale oo sar-sare oo haya manaasibta qasnado maaliyadeed ayaa lagu helay iney lunsadeen 21 bilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta ($ 203 milyan) oo loogu talagalay mashaariicda dhismaha.
Wasiirka maaliyadda, oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha kana baxay Jaamacadda Harvard, ayaa sheegay inuusan ku lug lahayn dambiyada ka dhacay dalka, laakiin aan ku xaddidnayn: u-hoggaansanaan la’aanta tilmaamaha soo iibsiga iyo shirqoolka lagu khiyaaneeyo maamulka iyo maareynta maaliyadda.
Dadka Kenya ayaa hawl gallada dhacay u arka kuwa masraxiyad ah oo loogu ceeb asturayo kuwa musuqa ku kacay, maadaama dhaca hantida uu dhaqan u yahay dhammaan mas’uuliyiinta wadankooda.